ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်သင်ကြားရေးဂျော့ဘ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု - လွှတ်တင်ခြင်း CV ကို🥇
ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်သင်ကြားရေးဂျော့ဘ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု🥇
ဇန်နဝါရီလ 7, 2018
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဇန်နဝါရီလ 8, 2018
အလုပ်အကိုင်အတွက်ဆုံးမဝါဒပေး ဒူဘိုင်း 2019 ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းရှိအလုပ်များကိုသင်ကြားရန်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုကြှနျုပျတို့ကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေကြပါသည် နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်စပ်လျဉ်း။ အံ့သြဖွယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်။ အမှန်တကယ်, ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ဆရာများကိုငှားရမ်းရန်ကူညီခြင်း။ အတွက်စုဆောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းနှင့်အတူ ယူအေအီး ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဘို့ လမ်းပြ။ ငါတို့သည်သင်တို့အလုပ်အကိုင်န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ကြသည်။ ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးဒူဘိုင်းမှာသင်ကြားရေးအလုပ်တစ်ခုဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာကိုမင်းအတွက်အဖိုးတန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးနေတယ်။
၏ဒါအများဆုံး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ နှင့်အနာဂတ်ဆရာ, ဆရာမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးအတွက်မာစတာသို့မဟုတ်ဘွဲ့ဒီဂရီရှိသည်။ အကောင်းဆုံးတစ်ခုကကမ္ဘာအနှံ့ရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များမှဘွဲ့ရခဲ့သည်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင်အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်တဲ့စံချိန်မီတဲ့ပညာရေးအာဏာပိုင်တစ်ယောက်။ အများဆုံးရှာဖွေနိုင်သောသူဖြစ်သည် ဒူဘိုင်းမြို့။ ငါတို့ကိုလည်းငါတို့ကြည့်ရှုသင့်သည် ဒူဘိုင်းသတင်းအချက်အလက် Link ကို.
တဦးတည်းအရာများအတွက်, ကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. တစ်ခုအတွေ့အကြုံကိုသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်တယ်။ အဆင့် 8 to12 ကနေအထိအဆိုပါလွယ်ကူသောတဦးတည်း။ ဒါကြောင့်မရ လူတိုင်းစော်ဘွားအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြောပြီ & ပိုကောင်း IELTS Band7ပညာရေးဆိုင်ရာနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ တိုင်းဆရာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှိရမည် Arabic အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုဘာသာရပ်အသိပညာ.
ရန်ဒါ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌ဤအလုပ်ရ သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းအဆင့်ကိုသင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး3နှစ်ပေါင်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အများစုမှာစုဆောင်း HR မန်နေဂျာများပိုကောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ဒူဘိုင်းနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အစားအွန်လိုင်းထက်။ ဒါကြောင့်သင်၏ယခင်အလုပ်ရှင်နှင့်အတူ, သင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စာသင်ခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်ဒူဘိုင်းရှိဆရာအလုပ်များကိုကူညီသည် အိန္ဒိယ။ ကြှနျုပျတို့မှာ မြင့်မားသောယှဉ်ပြိုင်မှုအာရပ်ဈေးကွက်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ နေရာ တတ်နိုင်သမျှအိန္ဒိယဆရာများ အင်ဒီးယန်း ဒူဘိုင်းအမေရိကန်ကျောင်းများရှိသင်ကြားရေးအလုပ်များကိုရှာဖွေရတာကိုနှစ်သက်သည်။ ဤအလုပ်ရှင်အမျိုးအစားသည်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘီဒါဘီတို့တွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယဆရာ ပိုလတ်ဆတ်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကောင်းတစ်ဦးသဘောတူညီချက်ဖြစ်လာ.
ယေဘုယျအားဖြင့်ဒူဘိုင်းအတွက်သင်ကြားရေးအလုပ်လျှောက်ထားစကားပြောခြင်းတစ်ခက်အရာဖြစ်သင့်သည်။ ရှိပါတယ် ယူအေအီးအသစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့များစွာသောနေရာလွတ်။ အိန္ဒိယကနေနိုင်ငံတကာပြည်တော်ပြန်။ အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များရှာဖွေနေ။ ဒူဘိုင်းအိန္ဒိယကျောင်းတွင်ဆရာမအလုပ်အကိုင်တွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအလွန်အမင်းအိန္ဒိယတွင်ပညာသင်ကြားနေကြသည်လျှင်။
သင်တို့သည်လည်းဒူဘိုင်းစီးတီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရနိုင်သည်။ သို့သော်ဒူဘိုင်းလစာအတွက်ဆရာအလုပ်အကိုင်များက high-class ကိုတက္ကသိုလ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအတော်လေးနိမ့်နေပေမည်။ ရိုးရိုး ဒူဘိုင်းမှလာမယ့်အာရှကနေလူတွေ နှင့်ရှိခြင်း ကလေးတွေ။ ထို့နောက်သူတို့မိသားစုအတွက်ကောင်းသောပညာရေးလိုအပ်သည်။ သင်လည်းလုပ်သင့်သည် ခေါင်းစဉ်ဒီလိုမျိုးရှာနေစတင်ရန်.
ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်း ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ ရေရှည်တွင်တက္ကသိုလ်များသည်မတူကွဲပြားသောကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြပြီးငယ်ရွယ်သူများပြားလာသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပညာရှင်များ။ လူကြိုက်များဤအချက်များပေးထား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အပြည်တော်ပြန်လမ်း ဒူဘိုင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးမဩဝါဒပေးနေကြသည်။ သင်တို့ရှိသမျှသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ကြောင်း ESL ပါဝင်သည်ရှိသည်ဖို့လိုအပ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်ပုဂ္ဂလိကကျူရှင် ဒူဘိုင်း နှင့်အဘူဒါဘီ, ဒါ့အပြင်လူတွေပုဂ္ဂလိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ပါ။
ကျောင်းဝင်းအပေါ်နေဖို့နှင့်ပါမောက္ခဖြစ်လာချင်တဲ့သူတွေကိုအိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။ သည်အခြားပညာရေးဆိုင်ရာ၏ပဒေသာလည်းရှိပါတယ် စဉ်းစားရန်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်များ။ အများဆုံးကျောင်းသားများကိုမှတ်ချက်ပြုထားသည်အဖြစ် 2018 အတွက်ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်ကြသူ အလွန်အဆင့်မြင့်အင်္ဂလိပ်ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ယူအေအီးတွင်စကားပြောခြင်းသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။ ရှင်သန်ရန်သာကြိုးစားပါ သင်ပေး အခြားလူများကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာရပ်များ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, သင်္ချာ, သိပ္ပံ, အနုပညာနှင့်အပါအဝင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Google ကနည်းပညာ.
ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန်အတွက်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း။ - CV တင်ပါ စော်ဘွား။ ဥပမာအားဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်ကောင်းမွန်သောအချက်များရှိသည် အံ့သြဖွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား အဲဒါကိုကြည့်ရှိသည်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။
ကမ္တာ့စီမံခန့်ခွဲမှု၏ SP Jain ကကျောင်း
ဒီကျောင်းကတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်ကို Global စီမံခန့်ခွဲမှု၏ SP Jain ကကျောင်း, အာရှ၏ထိပ်တန်းအဆင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်းများတွင်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုကျောင်းကကူညီဖို့ရန်၎င်း၏မစ်ရှင်အားဖြင့်မောင်းနှင်နေသည် MBA ဘွဲ့ရပညာရေးရဖို့ကလူ။ ကျိန်းသေ, ဒီကျောင်းကအိန္ဒိယအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေသောင်မတင်နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု for21st ရာစုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ.
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများကိုယူပြီးဒါဟာအံ့သြဖွယ်ကျောင်းများတွင်။ ဒါကကုမ္ပဏီဒူဘိုင်း၏မြို့များကျောင်းခွဲ running, အိန္ဒိယတွင်ကူညီပေးနေမွန်ဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ, စင်္ကာပူနှင့်ဆစ်ဒနီ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျ SP Jain ကျောင်းသားများအတွက်အပြည့်အဝအထုပ်နှင့်အတူ၎င်း၏ကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့ပေးကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ သငျသညျကျိန်းသေနိုင် အံ့သြဖွယ်သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံအရ ထိုသို့အမှန်တကယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကျောင်းကဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်စီမံခန့်ခွဲမှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်းကယူအေအီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အတော်လေးနုပျိုသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်အဘို့, SP Jain ကသူတို့က high-class ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုသောင်မတင်ဖြစ်ကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုယ်တိုင်ကထူထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကောင်းသောအမြင်အကြားစီမံခန့်ခွဲထားပြီး ပင်လယ်ကွေ့တဝိုက်အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ဒါကနိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်းများတွင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ SP Jain က 'အကြားအဆင့်ထားပြီးForbes မဂ္ဂဇင်းအတွက်ထိပ်တန်း 20 '''' အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာကျောင်းများ။
အကောင်းဆုံးကို MBA ဘွဲ့ရအစီအစဉ်များကိုတဦးကို Join
ဒါဟာကျောင်းက 2013-2019 အတွက် One-တစ်နှစ်တာ MBA ဘွဲ့ရအဆင့်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျထိုသူတို့အား join လျှင်အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျဖွစျလိမျ့မညျ ယင်းထိပ်တန်း 100 အကောင်းဆုံးအကြား ကမ်ဘာပျေါတှငျစီးပွားရေးကျောင်းမှ။ အမြောက်အများ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေ အဲဒီမှာပြီးသွားပြီးနောက်။ The Economist မှ 2015 ၌ဤကျောင်းသည်အလွန်ကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသားခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် Financial Times '' ထိပ်တန်း 100 ကို Global MBA ဘွဲ့ရ Programs ကို (2011 နှင့် 2012) တွင် featured ခဲ့ကြသည်။
သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူစတင်လာတဲ့အခါအပြုသဘောနှစ်ဖက်တွေအများကြီးရှိသေး၏။ ဥပမာအားဖြင့်, SP Jain ရဲ့ဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့လွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ ဒူဘိုင်းနှင့်အာရှမှာအကောင်းဆုံး။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဒီကျောင်းကပညာရေး / တက္ကသိုလ်ပညာရေးအရည်အသွေး & စံချိန်စံညွှန်းအေဂျင်စီ (TEQSA), သြစတြေးလျ၏ဦးစီးဌာနတို့ကအသိအမှတ်ပြုသည်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပညာရေးကောင်စီ, စင်္ကာပူ, နှင့်အသိပညာနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအာဏာပိုင်များကလိုင်စင်။ ဒူဘိုင်းဖြစ်ပါသည် လူနေမှုအဘို့ကြီးစွာသောရာအရပျ။ ဤအစီအစဉ်များနှင့်အတူ, သငျသညျကျိန်းသေဒူဘိုင်းအတွက်သင်ကြားရေးအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
SP Jain တက္ကသိုလ်မှလွှတ်တင်ခြင်း CV ကို - ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်သင်ကြားရေးဂျော့ဘ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု။
ဒူဘိုင်း, ယူအေအီးအတွက် Murdoch University မှ
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Murdoch University မှရန်သင့် CV ကိုအတူ Apply ။ အခြား သင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာကုမ္ပဏီ။ ဤသည်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးမဩဝါဒပေးဘို့အမှန်တကယ်ဒူဘိုင်းအတွက်ဦးဆောင်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ရှိရာန်ထမ်းများနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီအဘယ်သူသည် အိန္ဒိယကနေကျော်လာ။ အတူတူ Murdoch အတွက်လေ့လာနေကြသူလူများကြီးမားအောင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာခြားနားချက်.
အလွန်လူကြိုက်များ ပါကစ္စတန်ကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်သမားအဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ, တက္ကသိုလ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာစီမံခန့်ခွဲမှုဂုဏ်သတင်းကိုအလွန်ဂုဏ်ယူသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, တက္ကသိုလ်သင်ကြားရေးအတွက်ထူးချွန်ရှိခြင်း ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်။ သုတေသီများနှင့်အကြီးတန်းမန်နေဂျာများအတွက်အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဘို့လည်းအကောင်းဆုံး ဒူဘိုင်းအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှု ဒူဘိုင်းအတွက်ဆရာအလုပ်အကိုင်များစတင်ရန်ဖို့အကောင်းဆုံးများထဲမှ။
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Murdoch University မှယူအေအီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အသုံးပြုသူများအကြားကောင်းစွာစညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရပ်ကိုတည်ရှိသည် အဆိုပါအထင်ကြီးဒူဘိုင်း၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ နိုင်ငံတကာပညာရေးစီးတီး။ အသစ်ကျောင်းသားများအတွက်အလွန်လွယ်ကူ access ကို ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီတွင်နေထိုင်ကြသူလူများအတွက်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ် 2007 အတွက်စတင်လျင်မြန်စွာကောင်းစွာဒေသခံအသုံးပြုသူများအတွက်ကိုသိဖြစ်လာသည်။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်သင်ကြားရေးအလုပ်အကိုင်များရှာနေလျှင်ဒါ, သင် Murdoch University မှရန်သင့် CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ်။
Murdoch University မှမှလွှတ်တင်ခြင်း CV ကို - ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်သင်ကြားရေးဂျော့ဘ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု။
အယ်လ် Dar တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အဘို့အ Apply
အခြား သငျသညျအလုပျစတငျနိုငျရှိရာအရပျ အယ်လ် Dar တက္ကသိုလ်ကောလိပ် (ADUC) ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်အရည်အသွေးမြင့်ကျောင်းသားများအတွက်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အကြီးဆုံးတစ်ခုမှာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသင်ကြားမှုအလုပ်အကိုင်များများထဲမှ ကျောင်းသားများအတွက်သင်ယူရာအရပျ။ အယ်လ် Dar တက္ကသိုလ်ကောလိပ် 1994 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တက္ကသိုလ်သစ်ကိုကြောငျးသားမြားအတှကျတံခါးများဖွင့်လှစ်ပြီးကတည်းက။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်စီမံခန့်ခွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းကျင်သူများ။ အသစ်တစ်ခုကိုဆရာအဖြစ်ဤတက္ကသိုလ်ကိုလျှောက်ထားရန်ကြိုးစားနေ။
ADUC စက်မှုလုပ်ငန်း-သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့်အသစ်သောနိမိတျလက်ခဏာ-ups အဘို့အလက်တွေ့ကျတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုအမြင့်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်လူသိများသည်။ ဒီတက္ကသိုလ်နှင့်အလုပ်လုပ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်စိန်ခေါ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ADUC ကျောင်းသားများအတွက်အများအပြားရည်ရွယ်ချက်များစီမံခန့်ခွဲ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ဤသည်နေ့ရက်ကာလမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများလိုက်ရန်ဆက်လက်။ သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေလျှင်။ အယ်လ် Dar တက္ကသိုလ်ဒေသတွင်းနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ကအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးမဩဝါဒပေး ဒီတက္ကသိုလ်နှင့်အတူကောင်းစွာယူအေအီးအတွက်သိဖြစ်လာသည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အစက်မရှိသောကြည့်သေချာအောင်လုပ်ပါ. ALDAR တက္ကသိုလ်မှလွှတ်တင်ခြင်း CV ကို - ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်သင်ကြားရေးဂျော့ဘ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု။
BITS Pilani အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
သငျသညျအလုပ်အကိုင်များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာနောက်ထပ်နေရာကောင်းနည်းပညာနှင့်သိပ္ပံ, Pilani ၏ Birla Institute မှဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်-အဆင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အိန္ဒိယစီမံခန့်ခွဲမှုသင်ကြားရေးအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ထားရှိတစ်ခုမှာ။ Pilani သည့်ကြားတွင်ကျိန်းသေဖြစ်ပါသည်နည်းပညာနှင့်သိပ္ပံများ၏ Birla Institute မှ, ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအမျိုးသမီးတစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရာများ.
BITS Pilani အဆင့်မြင့်ပညာရေးများအတွက် All-အိန္ဒိယအင်စတီကျုဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော အာရှစီမံခန့်ခွဲမှုကိုယ်စားလှယ်များအကြားအလွန်ရေပန်းစား။ BITS ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးမဩဝါဒပေးဘို့မည်သူမဆိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ယောက်ျားမိန်းမတို့ BITS နှင့်အတူအနာဂတ်ဖန်တီးပေးနိုင်ကြသည်။ အဆိုပါ Birla အရေးယူသို့ compression စိတ်ကူးများအများစုထားဖို့ကြိုးစားနေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သူတို့ကလူလေ့ကျင့်နေကြ အသစ်သောနည်းလမ်းများနည်းစနစ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်တဖဲ့.
ဒါကအဖွဲ့အစည်းက၎င်း၏အသစ်သောကျောင်းသားများအတွက်စစ်မှန်တဲ့အိပ်မက်ရောက်လာပြီ အဘယ်သူသည်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ရှာကြသည်။ သငျသညျအိန္ဒိယလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ပါဝင်သူရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ ဒါကတက္ကသိုလ်သင်တို့အဘို့ကျိန်းသေပါပဲ။ သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူတွဲဖက်အပျနှံကိုပိတ်လိုက်ဖို့ရုန်းကန်ရှိကြ၏လျှင်။ သငျသညျကျိန်းသေနည်းပညာ Birla Institute ကိုအလုပ်မလုပ်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်သေးငယ်တဲ့ကျောင်းကအဖြစ်အစောပိုင်း 1900s အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဘို့အကောလိပ်များအစုတခုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့က, စကားပြော အံ့သြလောက်အောင်ကြီးပြင်း လူ့ထံမှအင်ဂျင်နီယာဌာနအထိ။
BITS တက္ကသိုလ်မှလွှတ်တင်ခြင်း CV ကို - ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်သင်ကြားရေးဂျော့ဘ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု။
Heriot-Watt နှင့်အတူပညာရေး၏ဗြိတိန်ပါဝါ။ ဒီတက္ကသိုလ်ကအထူးကုနှင့်ဗြိတိန်မန်နေဂျာတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှိနေခြင်း၏ကျိန်းသေတဲ့ရှေ့ဆောင်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်, မလေးရှား, နှင့်ဗြိတိန်ဒီတက္ကသိုလ်ကျယ်ပြန့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ရှိ၌နေသောသူစကားပြော ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် ဆရာအဖြစ်။ တစ် UK နှင့်သူတို့ဆန်းသစ်သည့်ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်အဖြစ် သုတေသနနှင့်မြင့်မားသောလုပ်ငန်းခွင်ဘွဲ့ရ။ ယခုအချိန်တွင် Heriot-Watt တက္ကသိုလ်မှဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသင်ကြားဘို့ကိုလည်းစုဆောင်း။
သူတို့အခွအေနမြေားအောက်, Heriot-Watt တက္ကသိုလ်ကဆင်းကိုင် ပွင့်လင်းလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးရက်ပေါင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်လက်ရှိဒူဘိုင်းအခြေစိုက်နှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသင်ကြားရှာနေကြပါသည်လျှင်သင်ကျော်လာနိုငျဘယ်မှာအများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်စကားပြော။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သငျသညျမကျြနှာကိုမှရင်ဆိုင်ရသူတို့ကိုရန်ပညာသင်နှစ်န်ထမ်းဆွေးနွေးချက်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ် ဖြစ်လာမှဘယ်လိုအကြောင်း ယူအေအီးအတွက်ဆရာ။ ထိုအခါအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်ကျောင်းသားများအတွက်အစီအစဉ်များ။ ထိုမှတပါး, သငျသညျလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပညာသင်ဆုအကြောင်းကို Heriot-Watt တက္ကသိုလ်မှစုဆောင်းမှုအဖွဲ့ကစကားပြောနိုင်ပါတယ်။
HERIOT watt တက္ကသိုလ်မှလွှတ်တင်ခြင်း CV ကို - ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်သင်ကြားရေးဂျော့ဘ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု။
ဒူဘိုင်းအတွက် Module တက္ကသိုလ်
ဒူဘိုင်းအတွက် Module တက္ကသိုလ်အလွန်အမင်းကျောင်းပရဝုဏ် rated ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်စကားပြော ဒူဘိုင်း Multi Commodities Center က DMCC, Jumeirah ရအေိုငျမြား Towers မှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက် Module တက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သူ့ဟာသူ prides ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသင်ကြားမှုအလုပ်အကိုင်.
ဤအချက်များအားပေး, ဒီမြေတပြင်လုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ 1st သြစတြီးယားတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရည်မှန်း။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်သြစတြီးယားရဲ့ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ရှာဖွေနေပါတယ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွက်။ သင်အလွယ်တကူဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးမဩဝါဒပေးဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, တက္ကသိုလ်တော်တော်များများရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ကျောင်းသားများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်။ ဥပမာတစ်ခုမှာစူပါအစွန်းပညာရေးအစီအစဉ်များဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, သငျသညျ BBA, B.Sc, MSc, MBA ဘွဲ့ရ & ပါရဂူဘွဲ့မှာကြည့်သင့်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကိုပညာရေးတစ်ခုမှာ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာဖို့ရာအရပျ။ သင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုံအလောက်ကဏ္ဍများကိုတွေ့လိမ့်မည်သေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနေကြသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်သည်ဤတက္ကသိုလ်နှင့်အတူပြီးစီးသည့်အခါသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် ကျိန်းသေယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့.
2019 အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်သင်ကြားရေးဂျော့ဘ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု။ Module တက္ကသိုလ် CV ကို Upload လုပ်ပါ။
ဒူဘိုင်းအတွက် SAE တက္ကသိုလ်
SAE ကိုအကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့ကိုမတစျဦးဖွစျသညျ အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများကျောင်းသားများအတွက်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဒူဘိုင်း၌မသာ 55 နိုင်ငံများတွင် 28 ကျော်ကျောင်းခွဲများရှိခြင်းနေကြသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, SAE တက္ကသိုလ်ယူအေအီးဈေးကွက်အတွက်သိကောင်းစွာဖြစ်လာသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ဖန်တီးမှုမီဒီယာပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံစံနှုန်း setting ထားပြီး။ ဒူဘိုင်းမြို့မှာတော့ကျနော်တို့ဂုဏ်ယူစွာ SAE ဒူဘိုင်းအတွက်လက်မှတ်များနှင့်ဒီပလိုမာအသိအမှတ်ပြုဆက်ကပ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့5စည်းကမ်းများကိုဖြတ်ပြီးအကောင်းဆုံးဘွဲ့ဒီဂရီတစ်ဦးရှိခြင်းနေကြသည်။ အတူအသံနှင့်အတူ foreground ကာတွန်းခုနှစ်တွင် ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအချိန် ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအဖြစ်။ သငျသညျဒီဇိုင်းနှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်ဂိမ်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် r ကိုရှာဖွေနေဒူဘိုင်းနှင့်ကာတာအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အ ecruitment။ ဒီနေရာမှာ Expatriate တွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာပါ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု.
2019 အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်သင်ကြားရေးဂျော့ဘ်များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု။ SAE တက္ကသိုလ် CV ကို Upload လုပ်ပါ။ အခုတော့ဖြစ်ပါတယ် cryptocurrency ကြောင်းအသစ်တခုဈေးကွက် သူတို့ပညာရေး၏အဆင့်မြင့်နှင့်အတူသာလူတွေကိုငှားရမ်းထားပါသည်။
များအတွက်နိဂုံး တစ်ဦးဆုံးမဩဝါဒပေး ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာသင်ကြားမှုအနေအထားကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြဲတစ်ထောကျအကူပွုလက်ပေးခြင်း။ တော်တော်များများရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများသတင်းအချက်အလက်များ သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ။ ကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်အများကြီးလည်းရှိပါတယ် အလုပ်ရကျိုးနပ်ဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီများမှ ဘယ်မှာသင်သည်သင်၏ CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ်။
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေနေနှငျ့သငျပြည်ပမှာအနေဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျကျိန်းသေတစ်ဦးမှာကြည့်သင့်ပါတယ် ဖိလစျကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ယူအေအီးတွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်သင်ရှာတွေ့မည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေပြီးသင်ကြားရေးကိုသေချာပေါက်ရှာဖွေနေခြင်းမရှိပါက ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ မင်းကြည့်သင့်တယ် ဒူဘိုင်းရှိမော်တော်ယာဉ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
ထိုမှတပါး, သငျသညျအစမှာနက်ရှိုင်းသောကြည့်သင့်ပါတယ် လေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များစော်ဘွားအတွက်ပူဇော်။ ပူပြင်းတဲ့ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ဘယ်မှာလဲ ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းရောက်ရှိဖို့?။ ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းနေသောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကုမ္ပဏီများအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်တို့အဘို့ရှာဖွေနေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များဒူဘိုင်း။ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောကုမ္ပဏီများမှကူညီပေးခဲ့တယ်။
ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့များမှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေကူညီပေးနေကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကလူတွေကိုကူညီနေတာပါ အလုပ်တစ်ခုရဖို့ ဒူဘိုင်းမှာ။ လူတိုင်းကိုကူညီနိုင်အောင်ကူညီပေးနေတယ် အလုပ်ရှာပါ။ ငါတို့နှင့်အတူဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်ရှာဖွေပါ စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများများစာရင်း.
ဒူဘိုင်း 2019 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးမဩဝါဒပေး
တစ်ဦးကိုရှာပါ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ယောဘသည်, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအတစ်စတင်ရန် အသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဒူဘိုင်းသေချာဘို့! အရာတစ်ခုမှာ စော်ဘွားအတွက်အလုပ်ရရန်။ အလုပ်အကိုင်အဆိုဒ်များငှားရမ်းအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအလုပ် site ကိုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့် ပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်ရှာဖွေအင်ဂျင်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ သငျသညျယခုလမ်းညွှန်များရနိုင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်။